iOS9တွင် Siri ၏အကြံပြုချက်များကိုပိတ်နည်း ငါက Mac ပါ
iOS9မှာ Siri အကြံပြုချက်များကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
ပါပလော Aparicio | | iOS ကို, လဲ tutorial
iOS9၎င်းသည် Apple ၏တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှုကို ဦး တည်စေသောပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone, iPod Touch နှင့် iPad သည်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်အတန်ကြာလုပ်နိုင်သောအရာများကိုတင်ပြနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းအနည်းငယ်သင်ယူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏ဤအဆိုပြုလွှာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ virtual assistant မှကျွန်ုပ်တို့ထံသို့လာလိမ့်မည် မှအကြံပြုချက်များ Siri ကို သူတို့သည် Search တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် iOS 8 အထိ Spotlight ဟုလူသိများသည်။
ယုတ္တိနည်းအရ (ပေးသည်) သည်၎င်းကိုများစွာသောပေးသော iOS အသုံးပြုသူများအတွက်အနည်းငယ်ထူးဆန်းနေနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ privacy ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်။ သီအိုရီအရ Siri မှကောက်ယူထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သူ့ကိုမျှမဝေမျှသင့်သော်လည်းအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထောက်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲမည်သူ့ကိုမျှလက်ကိုင်ဖုန်းအသုံးပြုခြင်း၏အလေ့အထများကိုသိစေချင်သည်ကိုနားလည်နိုင်ပါသည်။ ဒါကသင့်ကိစ္စဖြစ်ပါကပိုမိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေရန်သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာမှာ Siri ၏အကြံပြုချက်များကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။
1 Siri ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုပိတ်ထားသင့်သလား။
3 iOS 10 အတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုသီးသန့်တည်ရှိမှု
4 Siri ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ
တဖကျတှငျငါထင်ပါတယ် မထိုက်တန်ဘူး အထက်ဖော်ပြပါခံစားချက်အတွက်မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းပစ္စည်းကိုသာကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ခံစားချက်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Siri ကောက်ယူနိုင်သည့်ဒေတာများ၊ မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်ကဲ့သို့အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်လုံးဝအမည်မသိဖြစ်လိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်စရာရှိသဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှအသုံးမပြုဖူးဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ယူဆမိသည်၊ ကျနော်တို့သူတို့ကိုရပ်ဆိုင်းလျှင်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်.
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ၁၀၀% သေချာအောင်လုပ်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ငါတို့ကလွဲရင်ဘယ်သူမှငါတို့လုပ်တာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်ခုကငါပေးတဲ့နောက်ထပ်အကြံပေးချက်ကငါတို့ရဲ့ virtual assistant နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ် desactivar Siri ကို သော့ခတ်မျက်နှာပြင်မှ။ ပြiPhoneနာက iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုယူသူတိုင်းသည် home button ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ် နှိပ်၍ Siri ကို ၀ င်ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်“ ငါ့မွေးနေ့ကဘယ်အချိန်လဲ” စသည့်မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းနိုင်သည်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နုံလက်ထောက်သည်သင်စက်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှအရာအားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ဤအရာကိုတားဆီးလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Settings / Touch ID နှင့် Code သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး၎င်းသည်သော့ခတ်နေတုန်း ACCESS ကိုခွင့်ပြုပါအပိုင်းအောက်ရှိ Siri switch ကိုပိတ်ထားပါ။
iPhone7မှာအနည်းဆုံးတော့ဒီလိုရေးထားတာက start button ကိုနှိပ်ပြီးဖိထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထောက်ကိုတောင်းခံနိုင်သည် အဘယ်သူ၏လက်ဗွေမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လက်ချောင်းနှင့်အတူ။ ပြနာက Hey, Siri မရှိတော့ပါ။
iOS 10 အတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုသီးသန့်တည်ရှိမှု
ဒီ post ကို iOS9အတွက်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်အခုတော့ iOS 10 ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် Apple OS Operating System တွေမှာ MacOS Sierra၊ Tim Cook နဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ Siri နဲ့ Apple ရဲ့အတုအတွက်ပိုမိုအရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းဖို့လိုနေပြီ။ အထွေထွေလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ထောက်လှမ်းရေး သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှု၏အခြားတက်ရောက်သူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ပါ.
Apple တွင်ပုံမှန်အတိုင်း၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏သီးသန့်ဖြစ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ဟုခေါ်သည့်အရာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်စတင်ခဲ့သည် ကွာခြားချက် သီးသန့်လုံခြုံရေးApple ၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏အတုထောက်လှမ်းရေးတိုးတက်လာရန်နှင့်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုကောက်ယူမည့်စနစ် (၎င်းသည်ရွေးချယ်နိုင်သည်) ။
လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများကအလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည် WWDC 2016 တွင်သူပြောခဲ့သည့် Apple ၏အဆိုပြုချက်တွင်အလွန်များလွန်းသဖြင့်၎င်းတို့သည်သူတို့နှင့်ဆင်တူသည်ဟုကြားသိရသော်လည်းမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှထိုအရာကိုယခုအချိန်အထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဒီပုံစံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အက်ပဲလ်ဟာ Differential Privacy ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်စေတဲ့ပထမဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လိမ့်မယ်။ Google သို့မဟုတ် Facebook တို့လိုအခြားကုမ္ပဏီများကငါပြောနိုင်သည်။
မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင် ပိုပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်ပါ Siri ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမပြောစေချင်ဘူး။ သူ့ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုအဆင့်လေးဆင့်နဲ့ပိတ်ထားနိုင်တယ်။
iPhone, iPod Touch နှင့် iPad တို့၏ဆက်တင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်နိုင်သည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Spotlight Search ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် switch ကို deactivate သို့ဖြစ်စေ၊ Toggle အား ဒါဟာ "Siri အကြံပြုချက်များ။ " ကပြောပါတယ်
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် option ကိုပိတ်ထားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ virtual assistant ၏အကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရ ဦး မည်ဖြစ်သည် Spotlight ကိုiOS 10 တွင်၎င်းသည်သာမန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သော်လည်းထိုသို့ပြုလုပ်ပါကသင်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်မှာဝစ်ဂျက်များကိုတည်းဖြတ်ပြီး Siri Suggestions ကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါမည်။
Spotlight ကိုအသုံးပြုရန်ညာဘက်သို့ရွေ့သွားသည် (ဘယ်ဘက်သို့ရွှေ့လိမ့်မည်) ။
ဝစ်ဂျက်များ၏အဆုံးသို့ရောက်သည့်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့တက်သည် (အောက်သို့လိမ့်မည်) ။
ထို့နောက် Edit ကိုပြောသည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် Siri Suggestions ဘေးရှိတားမြစ်ထားသောခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Siri သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုလေးစားရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်သိပြီးပါပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iOS ကို » iOS9မှာ Siri အကြံပြုချက်များကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
သင်မြန်မြန်ရွေ့လျားသောအခါ cursor အိုင်ကွန်ကြီးလာသလား။
macOS Sierra တွင်မေးလ်အက်ပ်တွင် tabs များဖွင့်နည်း